Zvishandiso - Shenzhen Yrsooprisa Pro Runako Co., ltd
Kusarudzwa kweBristle Material
* Yakagadzirwa/ Nylon (Cruetly Mahara / Vegan)
Bristles akagadzirwa nevanhu, kazhinji kubva kunylon kana imwe tambo yekugadzira. Kusiyana nemabhurashi echisikigo, ekugadzira mabhurashi haana cuticle, izvo zvinoita kuti zvive zvakanaka kushandisa nemvura kana kirimu zvigadzirwa, senge hwaro uye kuvanza, nekuti hazvizoteya mhanzi.
Synthetic bristles inokombamira kune mumwe nemumwe, ichivaita vakakwana kunyatso shandiswa. Uye mabrashi ekugadzira haafanire kuunza matambudziko kana iwe uri allergies, acne kana senitivity prone (chero bedzi uchizvichengeta zvakachena zvechokwadi).
* Rudzi Bvudzi
Kudzidzira kunoita zvakakwana nemasikirwo emasikirwo emasikirwo, sezvo achinyanya kusimba uye achinyatsoita nani paunonyanya kuzvishandisa. Kana zvasvika kune zvigadzirwa zveupfu, echisikigo ekugadzira mabrashi ndiwo ako akanakisa sarudzo. Ivo vanoshanda zvinoshamisa nechero hupfu kubva kune bronzers kuenda kumeso eyeshadows, uye zvese zviri pakati, sezvo ivo vakaremerwa nehumwe kuitira kuti iwe uwane kunyorera kuri nani.
Bvudzi rechisikigo rinofamba zvakasununguka, richikubvumidza kuti usangotora chigadzirwa chakaringana mune imwe chete, asiwo kuisanganisa zvakanaka.
* Aluminium ferrule
Aluminium ferrules ndiyo inowanzoonekwa zvinhu, uye zvinhu zvikuru zvinoona mhando yavo ndeyekugadzirisa tekinoroji uye ukobvu.
Zvinoenderana nesaizi yeferrule, isu tinowanzo shandisa iyo aluminium ferrule ine ukobvu hwe0.3-0.5 mm. Mushure mekuwanda kwemaitiro uye kuongororwa kwakasimba, ivo vanobvumidzwa kushandiswa.
* Mhangura ferrule
Inofananidzwa nealuminium ferrules, mhangura mafuru ane kubwinya kuri nani uye kuomarara, asi iwo anodhura zvakanyanya.
Ivo anonyanya kushandiswa kune yakasarudzika uye ehunyanzvi ekugadzira mabrashi.
* Plastiki ferrule
Makeup Brush Bata ndipo panogona kudhindwa logo yako yerudzi uye rumwe ruzivo sechinangwa kana saizi.
Tine zvakawanda zvakavanzika kuumbwa muchitoro kwesarudzo yako
* Danda/ BAMBOO
Matanda emapuranga ndiwo anonyanya kushandiswa kubata zvinhu. Mhando huru dzehuni dzinosanganisira birch, bamboo, uye madota. Iwe unogona kugadzirisa mabhureki ekugadzira mabhureki mune zvakasiyana zvinhu uye mavara.
Isu tinowanzo shandisa zvigadzirwa zvealuminium yesimbi simbi, nyore kugadzirisa, uye kupenya.
* Chipurasitiki / Acrylic
Inowanzo shandiswa mune mamwe akasarudzika mahandara anobata, acrylic handles ndiwo akatanhamara pakati.